Vaovao - pejy 2 12 - Ny Martsa Manerantany
Zavakanto any Seoul sy ny «martsa maneran-tany»
15 Oktobra, 2019 14 Oktobra, 2019 ny Antonio Gancedo
Ny 9 Oktobra 2019, any Seoul, renivohitr'i Korea Atsimo, dia naseho ny 2 World March tao amin'ny foibe fivorian'ny Global Club. Nisy ny fampirantiana sary nalain'ny "Photographer Photographer", Bereket Alemayehu, avy any Etiopia, miaraka amin'ny fanazavana momba ny 2 World March, niresaka momba ny fomba
Diabe mifampitohy ho an'ny fandriampahalemana ao Varese
16 Oktobra, 2019 14 Oktobra, 2019 ny Antonio Gancedo
Ny ekipa mpanentana Alto Verbano dia nandray anjara tamin'ny volana martsa ho an'ny fandriampahalemana ho an'ny fandriampahalemana any Varese, izay natolotry ny Fivavahana ho an'ny fandriampahalemana Sezione Italiana (Gruppo locale di Varese). María Terranova, mpitondra tenin'ny ekipa mpanentana Alto Verbano ao amin'ny 8 World March for Peace and Nonviolence, dia nanambara ny dianay ary nanasa
Recoleta, mamorona lamba sosialy
Ny kolontsaina fananganana kolontsaina ara-kolontsaina "ao anatin'ny rafitry ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny volana Oktobra tamin'ny Recoleta" ary miaraka amin'ny tanjona famoronana lamba ara-tsosialy sy vondrom-piarahamonina marobe kokoa, dia nanao ny Andrana manodidina ny fandriampahalemana sy ny tsy fahatomombanana tamin'ny alahady teo amin'ny volana oktobra teo amin'ny manodidina Filankevi-pitantananana, Santiago de Chile. Nivoatra tsara ny mpiara-monina
Diabe ho an'ny fandriampahalemana ao amin'ny nosy Giglio
Mifanaraka amin'ny laharan'ny WorldNN XX ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fahatoniana. Ny fikambanan'i Yogarmonia momba ny fitsangatsanganana sy ny fitsangatsanganana, amin'ny fiteny ma / erika / fregene dia nanatanteraka hetsika fitsangatsanganana nandritra ny andro 2 sy 12 tamin'ny Oktobra. Ny hetsika dia martsa tao amin'ny nosy Giglio, Italia, tamin'ny lanonana ny 13 World March ary ho an'ny
Larache, tanànan'ny kolontsaina telo
17 Oktobra, 2019 13 Oktobra, 2019 ny Antonio Gancedo
Taorian'ny fidirana ny kaontinanta afrikana tamin'ny Oktobra 8 namakivaky ny seranan-tsambon'i Tangier izay nisy hetsika manokana nomanina handray ny World March Base Team sy ireo namany; aorian'ny fisehoan-javatra dia nifarana izy ireo nandany ny alina tao an-tanànan'i Larache. Ny Oktobra 9 tamin'ny volana Oktobra dia nanomboka ny fidirana
Arzantina, fiandohana any Córdoba sy El Bolsón
13 Oktobra, 2019 12 Oktobra, 2019 ny Antonio Gancedo
Arzantina ny dia iray tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa tao Córdoba, nifoha tamin'ny fanasana izy ireo handray anjara amin'ny fandefasana ny horonantsary fanadihadiana "Ny fanombohan'ny fitaovam-piadiana niokleary". Ao amin'ny "Andro iraisam-pirenena amin'ny tsy fanarahan-dalàna" ary ao anatin'ny rafitry ny Diabe faharoa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana,
Venezoelà, hetsika ho an'ny fandriampahalemana any Caracas
Nanomana marika fandriam-pahalemana izy ireo izay nasehonay antsika amin'ny sary ho toy ny karatra tsara tarehy. Izy ireo dia nizara resadresaka tamin'ny radio AlbaCiudad tamin'i Javier Guerra sy Jorge Ovalle momba ny fanombohan'ny 2 World martsa. Ary Forum Forum momba ny fanombohana ny 2 World March sy ny Andro iraisam-pirenena amin'ny tsy fanarahan-dalàna
Gaga i Costa Rica amin'ny lahatsary iray
18 Oktobra, 2019 12 Oktobra, 2019 ny Antonio Gancedo
Costa Rica dia gaga izahay tamin'ny horonan-tsary kely tamin'ny fiandohan'ny volana martsa miaraka amin'ny sekolin'ny ankizy iray nandeha an-tanànan'ny tanànany, ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fahatomombanana. Fotoana voalohany tamin'ny hetsika maro nankalazana ny "Andro tsy fanarahan-dalàna" izany. Ny fialana ofisialy tamin'ny 2 World March for Peace dia natao
Peru dia niarahaba vao maraina
Andro mialoha, ny fahombiazan'ny antso dia efa nalaina mialoha. tamin'ny tafatafa nifanaovana tamin'i Mariela Lerzundi sy Enrique Zegarra, avy amin'ny Promoter Team any Lima, Peru. Nohazavain'izy ireo taminay ny hetsika izay ho tanterahina any Peru, ao amin'ny sehatra 7.3 amin'ny fahitalavitra PERÚ. Ary koa, raha ny prezidà tamin'ny fanombohan'ny 2 World martsa, dia nisy
19 Oktobra, 2019 12 Oktobra, 2019 ny Antonio Gancedo
Ny fifindra-monina, ny thermometer amin'ny fahasalamana demokratika dia Symposium nokarakarain'ny Imartgine.com, 2ª World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fanoloran-tena, Sekolin'ny zavakanto ESDIP any Madrid, ny 26 septambra. Nanomboka tamin'ny famakiana sy ny latabatra teo amin'ny boky "Rahalahy Benjamina izay tsy azo sesitany", "Melilla tsy misy halatsa-bato mihidy" ary
Nandalo taminà Gran Canaria ny volana martsa
Ny volana martsa tany El Aaiún, varavaran'ny Sahara
Tonga ao Tan-Tan ny World March
Tonga tao Marrakech ny World March